Céline Dion, French pamoyo - Techip RELAY
Céline Dion, French pamoyo
Iris Mittenaere uye Diego El Glaoui: yavo wink…
Donald Trump anoti anoziva zita remunyori…
Leonie von Hase akasarudza Miss Germany: ndiani amai ava…
Ndiani asingazive kana kamwe chete kamwe Celine Dion rwiyo? Nyika inozivikanwa uye yakadhindwa mhizha, anogara akatakura rurimi rwaamai mumoyo make.
Nemashoko mashoma aya, zvese zvinotaurwa:
Ini ndinofunga mutauro wechiFrench wakanyanya rudo, unotarisisa - Chinyorwa de 20h de France 2, le 4 avril 1995
Celine Dion akazvarwa munaKurume 30, 1968 mu Charlemagne, Quebec. Mhuri yake yeBreton yekutanga inotaura chete French. Iye ndiye gotwe pane mukuru hama dzevana gumi nemana. Vaimbi vese, Céline Dion anogeza kubva pakuzvarwa mu zvemhizha mamiriro.
Céline Dion aine makore gumi nemashanu © AFP
- Ralph Gatti
Mudiki chaizvo iye anowana kudana kwake. Iye achava muimbi. Chete makore mashanu, anoenderera pachikuva chemuchato wemumwe wevakoma vake, Michel.
Akatora kufarira rwiyo uye akaridza muvabereki vake hotera.
Yakanga iri kubva panguva iyoyo yandainzwa kuda kuimba, kuti ndiwane meseji kune vanhu, kuti nditaure zvandaive nazvo pamoyo wangu - Hupenyu hwenguva yakazara, FR3, Ndira 27 1984
Makore mashoma gare gare, amai vake Thérèse vakamunyorera mukicheni yemhuri, Kwaingova kurota. Céline Dion anogadzira mumhanzi nemunun'una wake Jacques. Kurekodha kunotumirwa kuna René Angélil, inonyatso kuzivikanwa mumiririri muQuebec.
Pagumi nemaviri, Céline Dion anoenda kumahofisi a René Angélil uye wopfuura kuongorora.
Akandiita kuti ndiimbe pamberi pake, pasina mimhanzi, ndisina maikorofoni, ndisina vateereri uye ndinofunga kuti hapana chimwe chinotyisa - Hupenyu hwakazere-hupenyu, FR3, Ndira 27, 1984
Anomutora pasi pebepa rake uye makore anotevera, achaita Celine Dion, nyeredzi.
Pakutanga kwebasa rake, albhamu yake yekutanga minomwe yaingowanikwa muQuebec. Iwe unofanirwa kumirira 1988 kuwana a dambarefu idzva remusika weFrance, Incognito. Kusvika makore makumi maviri ekuzvarwa, anorota nezvebasa renyika dzese.
Céline Dion kumakwikwi eEvovion muna1988 © Getty
- Independent Nhau uye Midhiya
Mugovera Kubvumbi 30 1988, guta guru reIrish, Dublin, rine mabhuku makumi matatu nematatu Eurovision Song Contest. La Suisse inokwikwidza ne ... muimbi wechidiki weQuebec: Céline Dion. Nyika 21 dzinotora chikamu. ne Usandisiya ndisina ini, Quebecer ane makore makumi maviri emakore anokunda mukwikwidzi aine 20 mapoinzi.
Kuita kwake pamberi pemamirioni evaridzi veEurope kunofadza. Basa rake repasi rese rinotangwa. Asi kuti anyatsove mumwe, anoshaya chinhu chakakosha: kutaura Chirungu.
Kurota kwake kukuru
Kubva ndiri mudiki kwazvo, Céline Dion ane chiratidzo chikuru chebasa rake.
Chiroto changu chikuru, chokwadika, kuzova nyeredzi yepasi rese. Ini ndinofarira kuimba zvakanyanya, ndinoda kuimba nemitauro yakazara - Midi 3 Normandie, June 10, 1987
Anotora zvidzidzo zvechirungu zvakasimba. Muna 1990 zvakabuda Unison, opus yake yekutanga mumutauro weChirungu. Céline Dion anotangisa kukunda kwake kweruzhinji rweAmerica.
Céline Dion parwendo rwake rwekupedzisira, Shingai World Tour © AFP
- Alice Chiche
Nanhasi, kuverenga 27 Albums studio, 15 muchiFrench et 12 muChirungu, yekupedzisira yacho 2019, chivindi.
Asi kubudirira kwake kutaura mutauro weChirungu hakuna kumutadzisa kuchengeta ChiFrench pamoyo. Kunze kwezvo, iro rake On kwavari rakanyorwa uye rakagadzirwa muna 1995 na Jean-Jacques Goldman ndiyo French French kutengesa kwakanyanya munhoroondo.
Mutauro wemimhanzi ndeweAmerican. Asi kutaura chimwe chinhu, ndinofunga zviri nani kuzvitaura muFrench - Journal de 20h de France 2, le 4 avril 1995
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/celine-dion-le-francais-au-coeur-1581677804
TELES RELAY 21724 Posts 0 mashoko
Mushambadzi Eisai kubvisa uremu zvinodhaka Belviq mushure mekuedzwa kuwana kenza kubatana
Ini ndakadya ndega mumba yekutandarira yemumvura muDubai uye handina kuzombonzwa kunyara
Iris Mittenaere naDiego El Glaoui: chipfeko chavo cherudo ...
VaDonald Trump vanoti vanoziva humbowo hwemunyori weemaonero…
Leonie von Hase akasarudza Miss Germany: ndiani amai ava ane makore makumi matatu nemashanu?
Meghan Markle snub: vaimbove vashandi veSussex & # 039; kusuwa senge ...